Benefits of Positive Thinking by Daw Tin Nwai Win - Myanmar Network
Benefits of Positive Thinking by Daw Tin Nwai Win
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on September 25, 2013 at 15:59 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Benefits of positive thinking အကြောင်း မဆွေးနွေးမီ "What is positive thinking?" ကို ရှေးဦးစွာ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။
"Positive thinking is to look at things or consider things from the bright side" အရာခပ်သိမ်းကို အကောင်းဖက်မှု ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းကို "positive thinking" ဟုဆိုရပေမည်။
"What are the benefits of positive thinking?"
Positive thinking ၏ အကျိုးတရားများမှာ
Positive thinking helps us get good results from different situations.
People can make good things happen with positive thinking.
Positive thinking can make people happier စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
"Are you positive?" ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် quiz တစ်ခုကို ဉာဏ်စမ်းဖြေဆိုကြည့်ကြရအောင်။ Positive thinking နှင့် ပက်သက်၍ နိုင်ငံတကာမှ အဆိုအမိန့်များကို explanation အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်များဖြင့် ယှဉ်တွဲကြည့်ကြရအောင်။
Take this quiz. Match these sayings about positive thinking with their explanations.
1. Everyone smiles in the same language. – Unknown
2. Believe that you will succeed and you will! – The United States
3. Fall seven times, stand up eight. – Japan
4. Since the house is on fire, let’s warm ourselves. - Italy
5. Nothing is interesting if you’re not interested. – Scotland
6. Worry often givesasmall thingabig shadow. – Sweden
a. Keep trying. Don’t give up.
b. Small problems can look big when you are worried.
c. Life is more fun when you try new things.
d. Successful people havealot of confidence.
e. People understand smiling all over the world.
f. When you have big problems, try to look for the good things.
Matching exercise အဖြေများကို Answer Key ဖြင့် တိုက်ကြည့်ပါ။
"How positive are you?" ဟူသည့် အဖြေကို ရရှိလာပါမည်။
How positive are you? 1.e, 2.d, 3.a, 4.f, 5.c, 6.b
နိုင်ငံတကာမှ အဆိုအမိန့်များကို လေ့လာပြီးနောက် What stories have you heard about people who always think positively?
ဤမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော positive thinker ဆရာတော် အကျော်အမော်တပါးရှိခဲ့ပါသည်။ "မတ္တရာဆရာတော်ဘုရား" သည် အကောင်းမြင်ဝါဒတွင် အလွန်ထင်ရှားပြီး စံနမူနာတင်ထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တပါးဖြစ်ပါသည်။
Positive thinking နှင့် ပက်သက်သော sayings ဆိုရိုးများကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
Why not learn to enjoy the little things? There are so many of them.
To beagood champion, you need to believe you are the best.
ဤ sayings များ အနက်မှ သင်အနှစ်သက်ဆုံးတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး အဘယ်ကြောင့် နှစ်သက်ကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
Which of the sayings above do you like the best? Why?
Do you know another saying about positive thinking?
Positive thinking sayings များနှင့် ပက်သက်၍ "Half empty", "Half full" ဟူသည့် "pessimist" နှင့် "optimist" အဆိုးမြင်ဝါဒသမားနှင့် အကောင်းမြင်ဝါဒသမား နှစ်ဦး၏ တွေးတောမှုများကို သာဓကပြလိုပါသည်။
Wine အရက် တစ်ဝက်ရှိသော wine glass ကို ကြည့်၍ တစ်ဦးက "half empty" ဟုဆိုပြီး အခြားတစ်ဦးကမူ "half full" ဟုဆိုပါသည်။ အချင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပင် တစ်ဦးက "dim/bad side" မှမြင်၍ တစ်ဦးက "bright side" မှ ရှုမြင်တတ်ပုံတို့ကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။
Can positive thinking changeasituation? ဟူသော အမေးကို Magazine article ဆောင်းပါးတစ်ခု၏ ကောက်နှုတ်ချက်ဖြင့် တင်ပြ ဆွေးနွေးနိဂုံးချုပ်ကြရအောင်။
" The Power of Positive Thinking" ဖြစ်ပါသည်။
" Positive people are usually happy. They often havealot of friends. When they haveaproblem, they try to change the problem into an opportunity. They believe things always work out. "
Positive thinkers များဖြစ်၍ ဘဝ၏ တိုးတက်အောင်မြင်မှုများ ရရှိစေရန် တိုက်တွန်းထားပုံမှာလည်း
" Life can be difficult sometimes. Don't give up and be negative. Take action. Think about the future and makeaplan. You can learn to be positive."
ဤဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့် positive thinkers များ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
Reference Q: Skills for Success by Sarah Lynn (Page 62-65)
Daw Tin Nwai Win
Retired Lecturer (English Department, Yangon University) Diploma in Teaching of English Overseas (Leeds University), M.A (T.E.F.L) Y.I.O.E
Benefits of positive thinking အကွောငျး မဆှေးနှေးမီ "What is positive thinking?" ကို ရှေးဦးစှာ စဉျးစားကွညျ့ကွရအောငျ။
"Positive thinking is to look at things or consider things from the bright side" အရာခပျသိမျးကို အကောငျးဖကျမှု ရှုမွငျသုံးသပျခွငျးကို "positive thinking" ဟုဆိုရပမေညျ။
Positive thinking ၏ အကြိုးတရားမြားမှာ
Positive thinking can make people happier စသညျတို့ ဖွဈပါသညျ။
"Are you positive?" ဟူသော ခေါငျးစဉျဖွငျ့ quiz တဈခုကို ဉာဏျစမျးဖွဆေိုကွညျ့ကွရအောငျ။ Positive thinking နှငျ့ ပကျသကျ၍ နိုငျငံတကာမှ အဆိုအမိနျ့မြားကို explanation အဓိပ်ပါယျရှငျးလငျးခကျြမြားဖွငျ့ ယှဉျတှဲကွညျ့ကွရအောငျ။
Matching exercise အဖွမြေားကို Answer Key ဖွငျ့ တိုကျကွညျ့ပါ။
"How positive are you?" ဟူသညျ့ အဖွကေို ရရှိလာပါမညျ။
နိုငျငံတကာမှ အဆိုအမိနျ့မြားကို လလေ့ာပွီးနောကျ What stories have you heard about people who always think positively?
ဤမေးခှနျးနှငျ့ စပျလဉျြး၍ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ထငျရှားကြျောကွားသော positive thinker ဆရာတျော အကြျောအမျောတပါးရှိခဲ့ပါသညျ။ "မတ်တရာဆရာတျောဘုရား" သညျ အကောငျးမွငျဝါဒတှငျ အလှနျထငျရှားပွီး စံနမူနာတငျထိုကျသော ပုဂ်ဂိုလျထူးပုဂ်ဂိုလျမွတျတပါးဖွဈပါသညျ။
Positive thinking နှငျ့ ပကျသကျသော sayings ဆိုရိုးမြားကို ဖတျကွညျ့ရအောငျ။
ဤ sayings မြား အနကျမှ သငျအနှဈသကျဆုံးတဈခုကို ရှေးခယျြပွီး အဘယျကွောငျ့ နှဈသကျကွောငျးကို စဉျးစားကွညျ့ပါ။
Positive thinking sayings မြားနှငျ့ ပကျသကျ၍ "Half empty", "Half full" ဟူသညျ့ "pessimist" နှငျ့ "optimist" အဆိုးမွငျဝါဒသမားနှငျ့ အကောငျးမွငျဝါဒသမား နှဈဦး၏ တှေးတောမှုမြားကို သာဓကပွလိုပါသညျ။
Wine အရကျ တဈဝကျရှိသော wine glass ကို ကွညျ့၍ တဈဦးက "half empty" ဟုဆိုပွီး အခွားတဈဦးကမူ "half full" ဟုဆိုပါသညျ။ အခငျြးအရာတဈခုတညျးကိုပငျ တဈဦးက "dim/bad side" မှမွငျ၍ တဈဦးက "bright side" မှ ရှုမွငျတတျပုံတို့ကို ပျေါလှငျစပေါသညျ။
Can positive thinking changeasituation? ဟူသော အမေးကို Magazine article ဆောငျးပါးတဈခု၏ ကောကျနှုတျခကျြဖွငျ့ တငျပွ ဆှေးနှေးနိဂုံးခြုပျကွရအောငျ။
" The Power of Positive Thinking" ဖွဈပါသညျ။
Positive thinkers မြားဖွဈ၍ ဘဝ၏ တိုးတကျအောငျမွငျမှုမြား ရရှိစရေနျ တိုကျတှနျးထားပုံမှာလညျး
ဤဆောငျးပါးကို ဖတျရှုလိုကျနာခွငျးအားဖွငျ့ positive thinkers မြား ဖွဈနိုငျကွပါစေ။
Permalink Reply by Hnun Pan on September 25, 2013 at 16:43
Permalink Reply by aungthan moe on September 25, 2013 at 16:47
we like positive senses
Permalink Reply by Zaw Win on September 25, 2013 at 21:44
It is really kind of you, teacher.
It is invaluable for us.
Positive Thinking is crucial to develop our country.
May you be happy, healthy and wealthy!
Permalink Reply by Cindy on September 25, 2013 at 21:55
Thank you very much in deed !
Let me share . . .
Permalink Reply by Zar Chi Phyo on September 26, 2013 at 6:38
Permalink Reply by Thant Zin on September 26, 2013 at 10:38
Thanksalot for this post. I'm also interested in ""မတ္တရာဆရာတော်ဘုရား" and I found the following article.
Permalink Reply by zawzawmyint on September 28, 2013 at 17:22
Thank you very much for your sharing and teaching .I'm very interesting this page.I will try hard more and more.
Permalink Reply by Than Nwe on January 14, 2015 at 4:24
Permalink Reply by Aye Yadanar on August 20, 2015 at 12:37
Good to learn and good to beapositive thinker .
Permalink Reply by Saw Sandy Swe on May 18, 2016 at 16:17
Thank you for the article. Actually I am upset right now. I will try to find the opportunity from my terrible situation. :-)
Permalink Reply by htaylim on June 9, 2016 at 11:13